“Lamuu waanjoo garbummaa keessan maqaa Oromootiin uummata Oromoo irratti fe’uu hin dandeessan”: Pirazidaant Shimallis Abdiisaa - ETHIOPIANS TODAY
“Dhiiga keenyan warra diigne, dhiiga keenyaan deebisanii dhaabuudhaaf farda barbaaddachaa oolaa jiru…. Ammammoo farda biraa itti hin kenninu.”
“Waggaa lamaan darbe kana keessatti lixa Oromiyaa qofatti pirojektoota 17 daandii irratti qofa … Qarshii Biliyoona 38tiin … akka jalqabamu” taasisneerra.
“Sabbonummaan haasaa Televiziyoonattin osoo hin taane, gochaan jiraachuudha”
“Gudar-Limmuun-Jimmi Muummucha Ministeera keenyaaf hiikoo olaanoo qaba. Haati isaanoo Shawaa Lixaa dha ka’anii lukaan Jimma galan. Biyyi Abbaaf- Biyyi haadhaammoo har’a daandiidhaan walitti nu fidan”
Haasaa guutuu Obbo Shimallis Abdiisaa Ambootti taasisan
Looreeta Nagaa addunyaa kabajamoo Dr. Abiyyi Ahimad, Muummicha Ministeeraa Mootummaa Federaalaa Dimokiraatawaa Rippabliika Itoophiyaa, baga Magaala keessan Amboo-Niwuyoorkiitti nagaan dhuftan!
Kabajamoo fi jallatamoo Ambaasaaddara barnootaa keenyaa, Giifti Duree Mootummaa Federaalaa Aadde Zinnaash Taayyaachew – torbee darbe Goromtii turanii- har’amoo as dhufanii jiruu, isinis baga nagaan dhuftan.
Kabajamoo Obbo Dammaqee Mokonnin, Itti-Aanaa Muummicha Ministeera, fi Ministeera aajaa alaa, Kabajamoo Obbo Binnaalf Anduwalem, hoogganaa waajjira giddu galeessa Paartii Badhaadhinaa, isinis baga nagaan nuu dhuftan!
Warri Amboos- Abootiin Gadaa, Jaarsoliin biyyaa, Magaalaa Amboo irraayis, Magaalaa Gudar irraa- akka walii galaatti Godina Shawaa Lixaa irraa warri asitti argamtani hundumti keessaniyyuu, baga haala kanaan wal agarre! Simannaa hoo’aa haamilee namatti horu, ergama caalmaatiif nama qopheessuu waan nuu gootaniif guddaa galatoomaa, ulfaadhaan isiniin jechuun barbaada.
Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa rakkoolee kanaan duran turan keessa dhaabbatee rakkoo sana qofa faarsaa, madaa uummata keenyaa tuttuqaa, madaadhaan boochisaa jiraachisuu osoo hin taane, rakkoolee sana xiinxaluudhaan, kallattii sirrii fi tarsiimoo sirrii bocuudhaan akkaataa gaaffiin uummata keenyaa itti deebi’aa adeemu saganteessuudhaan hojii misoomaa hedduu jalqabee jira.
Harka tokkoon humnoota waggaa 27 nu qorqaa turan fuuldura dhaabbachuudhaan falmaa, ergamtoota isaanittin falmaa, harka biraatiin ammoo misooma ariifachiisaa kaabaa-kibbatti, bahaa-dhihatti mirkaneessuudhaaf xiyyeeffannoo addaatiin Mootummaan keenya hojjachaa jira.
Warri kaleessa nu ajjeesan, nu garafan, luka nurraa muran, qabeenya keenya saaman, sukkaara kuntaala kudhaniif jecha isnaayiperiidhaan warra nu fixan, warra sanis iddoo dhugaatti geggeessinee ergamtoota isaanis (haxaawaa) jirra.
Uummata Aambootiif, uummata Shawaa Lixaatiif, waa’ee Juntaa itti himuun uummaticha wallaaluu dha. Uummatni kun guyyaa jalqabaa humni kun biyya kana galee jalqabee marxifatee xiqqaa hanga guddaati aarsaa qaalii kaffalee jira. Aarsaan qaalii kaffale kunis firii buusee humnoonni kuna akka diigaman, akka buqqa’an ta’ee jira. Humnoota buqqa’aniif diigaman kana, dhiiga keenyan warra diigne, dhiiga keenyaan deebisanii dhaabuudhaaf farda barbaaddachaa oolaa jiru. Kanaan dura farda argataniiru. Farda keenya deeffanneera–akka Hacaaluun jedhe. Ammammoo farda biraa itti hin kenninu.
Ergamtoonni junta har’a Amboo irraa- giddugala qabsoo Oromoo irraa ergaa tokko isiniif dhaama. Lamuu waanjoo garbummaa keessan maqaa Oromootiin uummata Oromoo irratti fee’uu hin dandeessan. Habadan kun hin raawwatamu! Dhiigaan kuffisnee, dhiigaan hin kaasnu! Dhiiga keenyaan misooma keenya, bilisummaa, walqixxummaa biyya keenya keessatti bu’uura itti tolchuudhaaf jabaannee hojjanna.
Mootummaan jijjiiramaa keenya Looreta Nagaa Addunyaa Dr. Abiyyi Ahimadiin geggeeffamu, Waggaa lamaan darban kana keessatti lixa Oromiyaa qofatti pirojektoota 17 daandii irratti qofa akka jalqabamu taasisee jira. Kunis har’a Magaalaa Amboo fi Magaalaa Gudar, seenaa biyya kanaa keessatti yeroo jalqabaatiif magaalaa lama istaandaardii kanaan daandiin qal quunnamsiisu isa jalqabaa ta’a jechuudha. Isa kanaaf kabajamoo Muummicha Ministeeraa keenyaa akka naa galateeffattan kabajaan isin gaafadha.
Gudar-Limmuun-Jimmi Muummucha Ministeera keenyaaf hiikoo olaanoo qaba. Haati isaanoo Shawaa Lixaa dha ka’anii lukaan Jimma galan. Biyyi Abbaaf- Biyyi haadhaammoo har’a daandiidhaan walitti nu fidan. Guddaa galatoomaa! Ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada!
Saqqaa-Atinaagoo, Jimmaa- Cidaa, Caanqaa-Gidaamii, Shaambuu-Agamsaa, Gimbii-Mattuu, Najjoo-Begii, Beggii-South Sudan, Caanqaa-Gidaamii, Gullisoo-Calliyaa-Begii, Naqamte-Buree, Naqamtee-Kaamaashii, Dambidoolloo-Gaambeellaa, Aggaaroo-Geeraa, Suphee-Laalooqilee, Hojjaduree-Qanaatee… meeqa lakkaa’ee meeqa isinitti himu! Kun hundumtuu Waggaa 27ti miti. Waggaa lama keessatti geggeessummaa Muummicha Ministeeraa keenyaan lixa Oromiyaa qofaarratti jalqabame- Qarshii Biliyoona 38 oliin!
Kun naannoo keenyaaf, biyya keenya Itoophiyaadhaaf hiikoo guddaa qaba. Uummata walitti hidhuudhaan, diinagdeedheen bakka jiruu carraa isaa caalmaatti akka ba’u gochuudhaan, naannoo keenya biyyoota olla faana, naannoo keenya naannolee olla faana walitti hidhuudhaan sochiin hawaas diinagdee caalmaatti akka dagaagu gochuu keessatti hiikoo guddaa qaba.
Hojiin boonsaan kun yeroo gabaabaa keessatti caalbaasii fi diizayinii isaa xumuramee hundi isaanii–kanin armaan olitti eere– hojiin isaanii jalqabamee jira. Kanaafuu akka kanaan duraa waadaa sobaa, akka kanaan duraa ibsa adda addaa qofa oduu hin taane, hojii qabatamaa, jijjiirama qabatamaa kalattii waa hundaan hojiitti galchuudhaan karaa fedhii uummata keenyaa hunda ittiin milkeessinu qabannee jirra. Karaan kun caalmaatti ariifachuu qaba.
Uummatni keenya miidhaa isa ga’u, rakkoo isa ga’u keessa darbee jira. Ammaan booda misoomatti, ammaan booda badhaadhina mirkaneessuutti, ammaan booda jiruuf jireenyasaa jijjiirutti ce’uu danda’uun dirqama waan ta’eefi!
Akkan sila kaase, boonyee boochisuu, madaa tuttuquu odoo hin taane, seenaa haaraa hojjachuu, haala jijjiiramu faana mul’ata haaraa, beekumsa haaraa, kaayyoo haaraa qabachaa fuulduratti ariifachuu dha. Kana gochuudhaan naannoo keenya, biyya keenya Itoophiyaa dorgomaa gochuu, addunyaa faana wal qixxeessuu, kana abjuun Badhaadhinaa!
Badhaadhinni hawwii miti kan haasa’u! Gochaa qabatamaadhaan sabboonummaa isaa mirkaneessa. Kanaaf sabboonummaan kaleessa sirna nu cunqurse diige, har’ammoo rakkoo keenya isa bu’uura, duubatti hafummaa diiguudhaan addunyaa faana wal nu qixxeessuudhaaf humna ta’ee itti gargaaraa jira. Kana gochuudhaan jijjiirama barbaadamu, kallatti barbaadamu hundaan fiduudhaaf cimnee kan hojjannu ta’a. Kanaafidha sabbonummaan haasaa Televiziyoonattin osoo hin taane, gochaan jiraachuudha kan jennuuf! Kanammoo, hoogganaa keenya, Muummicha Ministeeraa keenyatu nu barsiise! Guddaa galatoomaa, ulfaadhaa jechuuniin barbaada!
Godina kana keessatti, Amboo-Walisoon, Gincii-Culluxxeen, jal’isiin Gudar, Sabsteeshiniinin (sub-station) asi Amboo-Gudaritti eebbifame, kanneen biro kan Gincii fi iddoo birootti ijaaramaa jiran, kun hundumtuu rakkoo hawaasa keenyaa hiikudhaaf xiyyeeffatamee kan hojjatamaa jiruudha. Kana hunda qindeessinee, kallattii tokkoon harka wal qabannee yoo jabaannee hojjanne yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama barbaadame sadarkaa barbaadamutti akka fidnu shakkii tokko hin qabu.
Warra biyya bulchuu hin dandeessan jedhanis biyya bulchuu irra darbinee addunyaa irratti Muummichi Ministeeraa keenya kabaja olaanaa, badhaasa olaanaa argatanii jiru. Iskiriiptoo qofaan angoon fudhatame, ce’ee diinagdee biyyaa, siyaasaa biyyaa fi Gaanfa Afriikaa jijjiiraa jira. Kana caalmaatti jabeessuudhaan, uummata keenya faana qindaa’uudhaan, injifannoo caalmaatiif kan qophoofne ta’uusaa, caalmaatti hojii olaanaadhaaf karoora babal’aa kan qabnu ta’uusaa asumaanan isinii mirkaneessa. Baayyeen isin jaaladhaa, baayyeen isin kabajaa….!
Haasaa Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa, Pirezidantii MNO jalqabbii hojii karaa Amboo-Gudar-Shanan-Sayyoo irratti taasisan
Gurraandhala 7, bara 2013, Amboo (Itoophiyaa)
Maddi: Oromia Communication Bureau